Xuquuqda ku tamashleynta baadiyaha | Håll Sverige Rent
Xuquuqda ku tamashleynta baadiyaha
Wadanka Iswiidhan waxaa ka jira qaanuun lagu magacaabo xuquuqda ku tamashleynta baadiyaha, taas waxeey ka dhigantahay in qof kasta uu xuquuq u leeyahay inuu si xor ah ugu tamashleyn karo keymaha iyo duurka haduusan dhibaato ama dhaawac u geysaneyn.
Qoraalka hoose waxaad ku arkeysaa qaar ka mid ah xuquuqaha muhiimka ah ee noo suurto galinaya inaan si wadajir ah ugu damaashaadi karno, inagoo hilbo ku dubaneyno, ku dabbaalaneyno, ka kalluumeysaneyno kana guran karno miro iyo waarig.
Xuquuq kasta waxaa gadaasheed ah waajibaad qofka saaran sidaas darteed ilaali dhulka dabiiciga ah hana ku reebin raad xun, taasi waxeey keeneysaa in eey carruurtaada iyo saaxiibadaa eey qeyb ka qaataan ku raaxeeysiga dhul dabiiciga quruxda badan. Hadii aadan nadaafada ilaalin isla markaana aanan xanaaneyn dhulka dabiiciga ah, hubaal maahan inaan sida xorta ah oo aan hada ugu tamashleyneyo si la mid ah aan kusii wedi karno mustaqbalka.
Internetka kasoo daji xayeeysiiska.
Meesha aad rabtid ayaad kaga sugnaan kartaa dhulka dabiiciga ah. Laakiin waxaa jira waxyaabo xadeysan. Tusaale ahaan kuma socon kartid boosaska gaarka loo leeyahay, Boos waxaa la dhahaa hareeraha meesha uu guriga ka dhisanyahay. Dadka guriga degan waa ineey ammaan helaan. Waxaad ogaataa in guryaha qaarkood eeysan laheyn deyr ku wareegsan. Sidaas darteed weey wanaagsan tahay in aad meel dheer ka martid. Waa dambi inaad aad ugu dhawaatid guri la degenyahay, laakiin mararka qaar weey adagtahay xadeynta masaafada aad ka fogaaneeysid guriga. Markaasoo kale waxaad hadey suurto gal tahay weeydiisaa milkiilaha guriga hadii kalana meel dheer ka mar.
Waxaad doorataa meel aanan khatar aheyn inuu dab ku faafo ama uu dhaawac u geysto dabeecadda, khaasatan waxaad doorataa meelaha loogu tala galay in dabka lagu shito. Marnaba dab haku shidin dhagaxyo buureedka korkooda, maxaa yeelay kuleelka dabka wuxuu dilaacin karaa buurta. Hana shidin dab hadeey jirto khatar laga qabo inuu dab weeyn ka kaco. Beeraha nasashada iyo dhulalka dabiicigooda la xafiday waxaa ka jira shuruuc gaar ah oo dhinaca dabshidista ah. Hadeey jirto khatar laga qabo dab waxaa mamnuuc ka ah goobtaas in dab laga shido. Degmada ayaa heysa warbixin dheeraada oo ku saabsan meelaha in dab laga shito eey mamnuuca tahay iyo wakhtiyada eey mamnuuca tahay.
Qashin leeska tuuro oo dhan waa mamnuuc. Wax aad u fudud waaye. Qashinkaada hore gurigaada ugu sii qaad. Ha iska dhaadhicin inuu baabuurka qashinka intuu keymaha soo galo kadibna kaa daba uruurinaayo qashinkaada. Isticmaal hadii eey meesha taal haanta qashinka lagu rido.
Ogoow ineeysan jirin musqulo markaad keymaha ku suguntahay. Fadlan ka dheeroow meelaha eey biyaha ku jiraan ama wabiyaasha ama ilaha. Sidoo kale ka fogoow dismooyinka iyo beeraha nasashada. Waxaad qodataa god hadaad rabtid inaad xaajo musquleedkaada gudatid kadibna duug godka. Gub warqada musqusha ee aad isticmaashay ama hore usii qaad si eeysan dabeesha u qaadin.
Xuquuqda ku tamashleynta baadiyaha wuxuu fursado wanaagsan kuu siinayaa inaad dhulka dabiiciga ah ku socotid, ku orodid, baaskiil ku wadid, ku wadid ulaha barafka iyo inaad fardaha ku fuushid. Laakiin sidaad rabtid ma sameyn kartid. Tusaale ahaan waxyaabahaan aan soo sheegnay kuma sameyn kartid dhul la falay ama dhul beereed kale oo aan u adkeysan karin in lagu dul socdo. Hadaad ka mid tahay dad badan oo isku wax sameeya ogoow inaad si wadajir ah dhaawac ugu geeysaneeysaan dhulka dabiiciga ah. Hadaad ka mid tahay dadka baaskiillada ama fardaha wada- aad taxaddar u lahoow. Kana digtoonoow inaad sameeysid dhabbayaal cusub maadaama eey dhaawacayaan keymaha!
Waxaad xaq u leedahay in aad ka gudubtid albaabka ama aad fuushid deyrka si aad ugu gudubtid meelaha ay bannaantahay in lagu tamashleeyo, hadii aadan dhex mareynin beero gaar loo leeyahay ama aadan dhibeyn mulkiilaha guriga.
Waxaa laguu ogal yahay in aad guratid khudaarta yar, miraha, ubaxyada iyo laamaha qalalay oo soo dhacay. Dhirta qaar ma bannaana in la guro oo sharciga ayaa saas dhigaaya. Ma laguu ogola in aad qaadid laamahooda, caleemahooda, mirahooda, waxaa kaloo laguu ogoleyn miraha geed aan wali si fiican u korin.
Warbixin dheeraada ka akhriso
Goobaha la xafiday sida beeraha qaranka ama dhulalka dabiicigooda la xafiday waxaa ka jira shuruucyo gaar ah, kuwaasoo ujeedadoodu tahay in xuquuqda ku tamashleyntoodu eey xadidantahay, mararka qaarna eey ballaarantahay. Ogoow macluumaadka ku saabsan arrintaas! Kana fiiri tabeellayaasha ku suran goobahaas.
Waa wax aad loogu maqsuudo inaad baaskiilkaada ama faraskaada si dheereeysa ugu wadid keymaha dhexdooda. Laakiin ku fakar inaad baqdin galin kartid dad kale ama xeywaanno ku sugan isla meesha aad joogtid oo waxyaabo kale sameysanaya. Xuquuqda tamashleynta keymaha iyo dhulalka dabiiciga ah waxaa loogu tala galay inaan si wada jir ah u ilaalsano goobaha naga wada dhaxeeyo! Taxadar dheeraad ah lohoow wakhtiga xagaaga ah maadaama eey tahay wakhtiga eey shimbiraha sameystaan buulka eey degaan.
Waxaad ku dabbaalan kartaa meel kasta oo lagu dabbaasho ee Iswiidhan marka laga reebo meelaha eey mamnuuca tahay in lagu dabbaasho, sababtuna waa si loo ilaaliyo shimbiraha ama xeywaannada badda ku nool qaarkood. Waana la mid markaad wadatid doon aad rabtid inaad si ku meel gaar ah ugu xiratid kaabadaha doomaha, waad ku xiran kartaa doontaada kaabad uu qof kale leeyahay haduu milkiilaha dhib kala kulmeyn. Doontaada waxaad ku wadi kartaa badda, balliyada iyo biyo mareennada, laakiin waxaa jira meelo qaar eey mamnuuc tahay inaad ku wadid. Mootada biyaha lagu wado waxaa logu wadi karaa meelaha qaar bis, waxaana yaqaan meelahaas maamulka gobolka.
Dabcan, waa madadaalo in aad bushkuleetigaada ku dex martid kaymaha iyo faraskaada. Basle maskaxda gali in aad dibin dadka kale iyo xayawaanada. Kuwaas oo wax kale samaysanayo, helitaanka xaquuqda banan aadiska wuxuu ku saabsan yahay qof kaste, sidoo kale qaadho taxadhar deer waqtiga hore ee xagaaga sababtoo ah tani waa marka shimbiraha ay ukuntooda canuga ka soo dilaacaayo iyo markii xayawaanada ay noolashooda ay tahay waqtiga ugu dareenka badan.
Warbixin dheeraad ka akhriso